Warshadda Jiingadda Lanyard - Shiinaha Lanyard Warshadaha Soo -saareyaasha iyo Alaab -qeybiyeyaasha
Silsiladaha lanyard -ka ayaa si weyn looga arki karaa dukaamada. Jijimooyinkani waxay ku habboon yihiin xayeysiinta, kor u qaadista, muujinta niyadda kooxda, taageeridda kooxda isboortiga ee la jecel yahay, ama muujinta qaab -shaqsiyeedka. Si ka duwan jijimooyinkii hore, waxay leedahay faa'iidooyinka qiimaha hoose, miisaanka fudud iyo astaanta loo habeeyay. Waxaa la habeyn karaa iyadoo la kaashanayo agabyada kala duwan, midabada, astaanta, iyo qalabka. Waxaa lagu xardhay suunka badbaadada ama xiritaanka la hagaajin karo. Xiritaanka la hagaajin karo waxay ka dhigi kartaa jijimadu inay ku habboon yihiin gacmaha. Jijimooyin dharbaaxo ah ayaa lagu soo saari karaa neoprene -ka ama maaddada lekab, waxay leedahay xarig bir ah oo ka mid ah jijimooyinka. Cabbirka caadiga ah waa 230*85mm. Jijimooyin tidcan ayaa si gaar ah loo habeeyay maadaama lagu tolan karo qaabab kala duwan. Cabbirka caadiga ah waa 360*10mm, hal cabbir ayaa ugu habboon (wuxuu ku habboon yahay 6 '' ~ 8 '' wareegga curcurka). Haddii aad doorbideyso cabbirka la habeeyay, taasi waa la soo dhaweynayaa. Maaddooyinka jijimooyin tidcan waa nylon ama polyester. Calaamaddu waxay noqon kartaa daabacaadda silkscreen, sublimated, weaven and etc. Si aad astaantaada uga dhigto mid aad u fiican, noogu imow waa doorashadaada ugu fiican. Anagoo ah adeeg-bixiyaha hal-joogga ah, waxaan ku soo bandhigi doonaa badeecad go'an oo ay ku jirto xirxirkeeda. Nala soo xiriir hadda, ha u oggolaan fursadda inay kaa tagto.
Jijimooyin Lanyard ah